Maxkamadda magaalada Boosaaso oo xakunno ku riday eedeysanayal. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Maxkamadda magaalada Boosaaso oo xakunno ku riday eedeysanayal.
Maxkamadda magaalada Boosaaso oo xakunno ku riday eedeysanayal.
December 31, 2012 - By: Abdirahman Abdi
Maxkamadda darajada koowaad ee gobalka Bari ayaa xakunno kale duwan ku riday rag ku eedeeysnaa falal burcad badeedninmo
Eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay, islamarkaana xakunka lagu riday ayaa ka mid ahaa ahaa raggii aftuubka u heystay markii Mv Iceberg 1
Waxaana maxkamadda la horkeenay 3 eedeysane oo ay dhawaan soo qabteen ciidanka badda Puntland, 3 nin iyo 12 kale oo aan gacanta lagu heyn, islamar ahaantaana ka mid ahaa kooxo burcad badeedda ah oo afduubna u heystay 22 qof oo badmaaxyaal ah kuwaas oo dhawaan ay soo furteen ciidanka badda Puntland ayaa xakunka lagu riday.
Burcad badeeda baxsatay oo lagu sheegay tiradooda 12 ayaan faah faahin maxkamada iyo saxaafadda laga siin qaabkii ay ku baxsadeen. Ragga baxsaday ayaa waxaa ku jira hogaamiyihii kooxdii heysatay markabka MV Iceberg 1.
12ka nin ee la sheegay inay baxsadeen ayaa la tuhunsan yahay in ciidamada bada siidaayeen oo ay wadada u fureen kadib markii wadahadal dhexmaray, sida ay Horseed Media u xaqiijiyeen xubno kamid ah ciidamada Bada ee ka qeyb qaatay hawlgalkii ka dhacay duleedka magaalada Garacad.
Sadexda nin ee maxkamada lasoo taagay ayaa ayagu ahaa kuwii gacanta siinayey burcadbadeeda la sheegay inay baxsadeen raggan ayaa laga soo qabtay dhanka beriga. Burcad badeeda la sheegay inay ka baxsadeen markabka MV iceberg 1 ayaa la sheegay in ayagoo hubkooda wata ay aadeen dhanka koonfurta Mudug.
Sh. Aadan Aw-Axmed oo ah gudoomiyaha maxkamadda gobalka Bari ayaa ku dhawaaqay xakunka ka dib markii dacwadda ragga eedeysanayaasha la dhageystay.
Labo ka mid ah seddexda nin ee la horkeenay maxkamadda ayaa lagu xakumay 10 sano oo xarig ah iyo lacag dhan 50 milyan/Sh.So.
3 sano iyo lacag dhan 50 Milyan Sh.So.ayaa lagu xakumay eedaysanihii sedexaad.
Eedeysanayaal kale oo qeyb ka ahaa ragga maanta la xakumay oo aan gacanta lagu hayn ayaa midkiiba waxaa lagu xakumay 12 sano oo xarig ah, iyo ganaax lacageed oo gaaraya 50 milyan Sh.So.
Waxaana maamulka Puntland ay la wareegtay hubkii lagu soo qabtay raga maanat la xakumay.
Hawlgalka Markabka MV iceberg 1 ayaa socday muddo 15 maalmood ah ayadoo markii danbe lagu guuleystay in burcad badeeda ay siidaayaan 22 kamid ahaa 24kii shaqaalihii markabkaasi oo la sheegay in 2 kamid ah ay dhinteen intii ay afduubka lagu heystay.